Kate Zeid's Zvinyorwa pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Kate Zeid
Kate Zeid, Hey DAN Kukura & Kushanda SVP: Yakahaiwa neHey DAN's mubereki kambani Civicom kuunza zvigadzirwa zvitsva kumusika muboka rose muna 2005, Kate Zeid anotungamira Hey DAN kukura uye kushanda timu. Kate anoshanda pakukura kwechigadzirwa, kushambadzira, sevhisi yevatengi uye tarenda uye anoenderera mberi nekufambisa kukura kwemari kuburikidza nekudyara mune inotevera gen.
Chitatu, November 3, 2021 Chitatu, November 3, 2021 Kate Zeid
Kune misangano yakawandisa yekurongedza muzuva rako uye kwete nguva yakakwana yekurekodha iwo akakosha ekubata mapoinzi. Kunyangwe pre-denda, zvikwata zvekutengesa uye zvekushambadzira zvaiwanzoita misangano yekunze inopfuura 9 pazuva uye ikozvino ine kure uye yakasanganiswa yekushanda yekurara kwenguva yakareba, mavhoriyamu emusangano ari kuwedzera. Kuchengeta rekodhi chaiyo yemisangano iyi kuona kuti hukama hunosimudzirwa uye yakakosha data yekuonana haina kurasika yave chinhu.